Eoropa Tratran’ny Krizy: E-Boky Voalohany Navoakan’i Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2012 11:54 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Swahili, Français, Italiano, Português, عربي, বাংলা, srpski, Español, Aymara, English
“EU in crisis” (Eoropa Tratran'ny Krizy amin'ny teny anglisy) no vokatra voalohany avy amin'ny tetikasan'ny Global Voices Books ary ahitana ny tsara indrindra tamin'ireo resaka an-tserasera nifanakalozana, nandraisana anjara ary nirohotan'ny mpiserasera nandritra ny fotoana mafin'ny fifehezan-kibo ao amin'ity kaontinanta iray ity sy ny mihoatra izany aza.
Nangonina sy natambatambatray ny lahatsoratra tsara indrindra, izay hita ao amin'ny pejy manokana Eoropa tratran'ny krizy nanomboka ny Lohataona 2011, ary nosoratan'ireo olona tia manangom-baovao iraisampirenena ato aminay.
Navoaka eo ambanin'ny lisansa Creative Commons Attribution 3.0 ny e-boky ary azo trohina amin'ny alalan'ny endrika (formats) telo:
Narafitra ho fitaovana azo ampifanarahana amin'ny fampielezana sy hanarahana ny adihevitra mbola mitohy hatramin'izao ity e-boky ity.
Global Voices Books dia mikendry ny “hizara ny vaovao ifampizaran'olo-tsotra ho amin'ny ho avy“, araka ny hita eo amin'ny dika an-tsoratra, mifototra amin'ny tahirin-kevitra goavan'ny GV sy ny vokatra amin'ny fiteny samihafa. Hamoaka tahirin-kevitra an-tserasera araka ny lohahevitra, faritra, adihevitra, fiteny, media, sns atao amin'ny endrika samihafa izahay, ka avy amin'izany no amoahana ny vokatra tsara indrindra vitan'ny fikambananay nandritra ny taona vitsivitsy.
Aelezo azafady, tsidiho ny vohikalan'ny Global Voices Books ary mirotsaha!
Hajian-tsary natonta printy indray avy amin'ny Vectorportal.com, ambany lisansa Creative Commons Attribution 2.0